Indawo ejongene neLake Bin el Ouidane - I-Airbnb
Indawo ejongene neLake Bin el Ouidane
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguLorenzo
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uLorenzo iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le Apartment isembindini wendawo yokuhlala egadiweyo, kunxweme lweLake Bin el Ouidane embindini wendalo. Unokufikelela kwinkundla yentenetya, amabala e-petanque kunye neendawo ezininzi eziluhlaza kubandakanya iindlela ezikhokelela echibini. Le ndlu ibekwe kumgangatho ophantsi kwaye inika umbono omangalisayo wechibi.
Le ndlu inegumbi lokulala elineebhedi ezimbini, igumbi lokuhlambela elineshawa, isinki kunye nendlu yangasese kunye neelinen zabantu aba-4. Igumbi elikhulu eliphambili lenziwe yikhitshi laseMelika, igumbi lokuhlala elineebhedi ezimbini ezingatshatanga, kunye nendawo yokutyela. Uya kuba nethafa elinegadi enika umbono omangalisayo wechibi. Le ndlu ixhotyiswe ngomabonwakude enazo zonke iziteshi zamazwe ngamazwe, i-wifi, i-air conditioning kunye nokufudumeza, i-oven, umatshini wekofu, i-toaster ...
Ukufikelela kwiflethi kudlula kwizinyuko ezihla ukuya kumgangatho ophantsi
Ichibi leBin el Ouidane likwindawo ekude enorhwebo oluncinci. Ilali yaseOuaouizert ikumgama oziikhilomitha ezisi-8 kwaye ungafumana iimveliso ezisisiseko njengemifuno, igrosari, kunye nekhemesti. Kuzo zonke ezinye iimveliso ndikucebisa ukuba uzithenge ngaphambili okanye uzithenge eBeni Mellal (idolophu iyure ngemoto ukusuka kwigumbi lokuhlala)
Ukuba ufuna ukutyelela iindawo ezintle ezikufutshane ndikucebisa ukuba uye kubona i-cathedral (1h30 ngemoto) kunye neengxangxasi ze-Ouzoud (iyure eyi-1 ngemoto).
Ukhenketho lwephenyane kwichibi laseBin el Ouidane luyafumaneka kufutshane nehotele yaseShems (imizuzu eyi-15 ngemoto)